हामी माडीबासी सम्भावित अप्रिय खबरले भयावित छौँ
Monday, 23 May, 2016 4:45 PM
विभिन्न राजनैतिक आस्था र बर्गीय स्वरुपमा विभक्त आम माडीवासी, माडीको बिकास र समृद्धि कै खातिर आज एउटै बिन्दुमा उभिएर साझा धारणा बनाउनु एउटा ऐतिहासिक महत्वको बिषय हो । फरक दिशातिर फर्किएका राजनैतिक दल र नेताहरु आ आफ्ना स्वार्थ भन्दा एक स्तर माथि उठ्दै समग्र माडीको स्वार्थको लागि काँधमा काँध मिलाएको दृष्य ( जसले पंतिकार स्वयंलाई भावुक बनायो ) जनताले बर्षौँ देखि हेर्न चाहेको एउटा महँगो सपना थियो । यसर्थ समग्र परिस्थितिको दृष्यावलोकन गर्दा हामी हाम्रा सपनाहरु साकारोन्मुख छौँ ।
तर यता हाम्रा समस्या र सपनाहरुको साकारको शृङ्खला सुरुवात हुनुअगावै फेरि हाम्रो मिहेनतमा बिगतमा झैँ गतल तत्वले फाईदा उठाउन खोज्दैछ । एकातिर बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज हुँदैछ , अर्कातिर नगरपालिकाका कर्मचारी , केही समाजसेवी र स्थानिय नेता भनौँदाहरुको टोली हाम्रै पैसामा रसलिला गर्ने सपना बुन्दैछन । के हाम्रो अद्वितीय एकता र सहकार्य फेरि कुनै निश्चित तत्वको स्वार्थपूर्तिका लागि हो ?
केही दिन अघि बाढीले बगाएर माडी नगरपालिका १२का ५५ वर्षीय विष्णु अधिकारी र सोहि ठाउँकी ३५ वर्षीया कल्पना थापा क्षत्रीको दुखद निधन भयो । घटना सेलाउन नपाउँदै गैडाको आक्रमण बाट माडी नगरपालिका बडा नम्बर १२ कृष्णनगरका ७२ वर्षका ईन्द्र प्रसाद अधिकारी र उहाँकी ६५ वर्षकी श्रीमती रनदती अधिकारी धाईते भए । के नगरपालिकाको कर्तव्य रहात बितरण मात्रै हो ?
वर्षा आउँदैछ , हामी सम्भावित अरु अप्रिय खबरले भयावित छौँ । बिगतको नियति हेर्ने हो भने हामीले बाढीबाट घरजग्गा गुमाउन बाँकी नै छ , आफन्त गुमाउन बाँकी नै छ , मिहेनतले लगाएको धान बगाउन बाँकी नै छ । हात्ती बस्तीमा पसेर जनधनको बिनाश गर्न बाँकी नै छ । गैँडाको आतंक पूरा भएकै छैन । भालु र चितुवा आफ्नै ठाउँमा छन ।
के हामी घटना घटोस अनि जे पर्ला टर्ला भनेर बसेकै हो ? नत्र यति संवेदनशील अवस्थामा नगरपालिका को भुमिका असामान्य देखिन्छ ।
यो भ्रमण गरेर समय र बजेट सक्ने बेला होइन , सम्भावित विपत्ति कसरी रोक्ने भनेर चिन्तन मनन गर्ने बेला हो । विपद जोखिम पुर्व सुचना प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारि बनाउने भनेर सोच्ने समय हो । जंगली जनावर बस्ती पस्न नदिन के गर्ने र कसरी बच्ने भनेर प्रतिरोधात्मक उपाय अंगिकार गर्ने बेला हो ।
भर्खर हामीमाझ बिजुली कम लोडसेडिङ ज्यादा पुगेको छ । यसलाई छिटो छरितो र गुणस्तरीय रुपमा घरघरमा कसरी पुर्याउने , न्युनतम लोडसेडिङका लागि कसरी पहल गर्ने , करेन्ट तथा अन्य दुर्घटनावाट बच्न कसरी जनचेतना फैलाउने भन्नेवारे पुर्वयोजना बनाउने समय हो । बिगतका बाढीपीडितहरुको उचित ब्यबस्थापन बारे सोच्ने समय हो । भर्खर बनेको माडी बिकासको कार्ययोजना कार्यन्वयन प्रक्रिया वारे सोच्ने समय हो ।
तर किमार्थ माडीवासीको भविष्य दाउमा राखेर माडीवासीकै पैसामा रजाइँ गर्ने बेला होइन । त्यसैले , नजिकिँदै गरेको बिपत्ति बाट हुने क्षति न्युनिकरण बारे तत्काल कदम चालौँ । हाम्रो भविष्य बारे सोचौँ , भारत भर्मणबारे होइन । र आम माडीवासी सचेत जनसमुदायले आआफ्नो ठाउँवाट गलत तत्व र प्रवृत्तिको खुलेर बिरोध गरौँ । माडी बिकासको लागी अझ सक्रियता र गम्भिरताका साथ अघि बढौँ ।